တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အူပါ ရှူပါ ...
Posted by မေဓာဝီ at 2:10 PM
အူ ရှူပါ တစ်ပွဲ ပေးပါ မမေ...။ အဲ.. ပဲကြော် တစ်ထုပ်ကို ၁၂ ဒေါ်လာ ဆိုတော့ ဈေးကြီးလိုက်တာ။ တော်သေးတာပေါ့.. ရို့စ်က ကိုယ့်ဘာကိုယ် ကြော်တတ်လို့။ ဒီမှာ ကြော်ပြီး ရောင်းစားရင် ကောင်းမလား မသိဘူးး) ဒါနဲ့လေ... ပဲကြော်နဲ့ ပဲကပ်ကြော် မတူဘူး သိလား။ ရို့စ် ရန်ကုန်မှာ စားနေကျ ပဲကပ်ကြော်က ကောက်ညှင်းမှုန့် ထည့်ကြော်သလား မသိဘူး စေးစေးလေးနဲ့ ကိုက်လိုက်ရင် ချွဲချွဲလေး။ ပဲကြော်ကတော့ မုန့်ပာင်းခါးထဲ ထည့်စားတဲ့ ပာာ သက်သက်။
ဗျို့ဗျို့ .. .အန်တီ မေဓာဝီ... အူပါ ရှူပါ နောက်တစ်ပွဲလောက် လုပ်ပါဦး ... ဖလူး ဖလူး ရှူးရှူး
စားချင်တယ်.. အတော်နှိပ်စက်တယ်.. ငတ်နေတာကြာပြီ.. :P
1/13/2011 2:56 PM
ရှူးရှဲ ရှူးရှဲး)
အအေးလေးပါ ဖျော်တိုက်ပါဗျို့ ။
အူပါ ရှူပါ ဆိုတော့ စာမဖတ်ခင်က စိတ်ထဲထင်တာ Charlie and the Chocolate Factory ထဲက Oompa-Loompa လေးတွေ အကြောင်းများလားလို့....
စားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ မေ...း))
တော်သေးတာပေါ့။ အူရှီး သူရှေး မဟုတ်လို့။ ဟဲ ဟဲ။ စတာ။
အခုလိုရာသီမှာ အဲဒါမျိုးလေး စားတော့စားချင်သား။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မုန့် ပန်းကန်တွေ့ တော့
ပို့ စ်ခေါင်းစဉ်အတိုင်း..ထ..ဘဲ.. အူရတော့မလိုလို..
ကွန်ပြူတာ စကရင်ကိုဘဲ ကပ်ပြီး ရှုရတော့မလိုလို...
သေချာ အနံ့ ခံကြည့်မှ....
အမေရိက ကပါလာတဲ့ပဲကြော်ရယ်..
ရေခဲသေတ္တာထဲက နှစ်ချို့ ငါးလေးရယ်...
“ရှေးဟောင်းရခိုင်မုန့် တီ ပြပွဲ ” များလားဟင်.....
1/13/2011 5:21 PM
အူပါ ရှူပါ ဆိုတော့ ဘာများလဲလို့။ အာပူ လျှာပူကို ပြောတာကိုး။
အပျိုကြီး မမ အတော်နောက်တယ်။
အို့ အို စားချင်လိုက်တာ
ခုပဲ အအေးထဲကပြန်လာတော့ ဒါမျိုးလေး
စားရရင် သိတ်ကောင်းမှာနော်။ ပဲကပ်ကြော်က
၁၂ဒေါ်လာလား။ ကိုယ်တို့နေတဲ့ နေရာမှာတော
့ ၄ချပ်ကို ၁ဒေါ်လာပဲပေးရတယ်။ အချပ်လည်း တော်တော်ကြီးတယ်သိလား။
၀ိုး!ကြီးမေရေ ကြက်သရေခန်းထဲက လိုတာရလို့ တော်သေးတယ်နော် ကြီးမေရေ ဗိုက်ဆာတယ် မိုးမလင်းခင်ထကြည့်မိလို့ မနက်တော့ပြေးစားတော့မည် အစုံပါ တပွဲမှ ၄၀၀ကျပ်ပါဗျားးးး))
အူပါ ရှူပါဆိုတော့ တကယ်ပဲ ဘာများလဲလို့ တွေးမိတယ်.. ပဲကြော်က နည်းနည်းတော့ ဈေးကြီးတယ်နော်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မကြော်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေသား.. :)
1/13/2011 9:40 PM
နေမကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ နေ့မှ ဒါကို ဖတ်မိရတယ်လို့ဗျာ။
မြို့ထဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးတော့ ရသား ၊ အာပူ လျှာပူ ( အူပါ ရှူပါ ) ကတော့ မရ။ ဒါကြောင့် သွားရည်တွေ ကျသွားပါကြောင်း။
ဆေးလေးသောက်ပြီး ဒါလေး ဂလုလိုက်ရရင်တော့ ကွေးလို့ ကောင်းလိုက်မဲ့ အမျိုး...။
1/13/2011 9:46 PM
အူပါ ရှုပါ အရည်၁ပွဲ
ရာသီနဲ့ အခါမှီတဲ့ အာပူလျှာပူလေးပေါ့နော်..
မမေ ဒီလောက်အေးတဲ့ အင်္ဂလန်ဆောင်းမှာ အာပူလျှာပူလေး မရောင်းချင်ဘူးလား
ငပိနဲ့လေး တစ်သင်းသင်းနဲ့ဆိုတော့ ဒင်းတို့ဆွေမျိုးမေ့လောက်တယ်နော်...း)
ဒါမှ မြန်မာ့အစားအစာ ကမ္ဘာကျော်သွားမှာ
1/14/2011 12:09 AM
အင်းလေ ဒီလိုပါပဲလေ စီးပွားရေးဆိုတော့...
1/14/2011 12:22 AM
ချမ်းချမ်းစီးစီး မှာ အူပါရှုပါ က အကောင်းဆုံးဘဲ ကောင်းပါဗျာ ၃ပွဲလောက် စားသွားလိုက်မယ်
1/14/2011 1:45 AM
1/14/2011 2:10 AM
မေရီချစ်တီး ဒန်ပေါက်ကတော့ မဆိုးပါဘူး.
အဲဒီ ပဲကပ်ကြော်က အကြော်မုန့်နှစ်တွေ နဲ့ ကြွပ်အောင်ကြော်ထားတော့ သိတ်မကြိုက်ဘူး..
ဥပြုတ်က ဘာလုပ်တာလဲ။ ငါးဖယ်ရော။
1/15/2011 1:19 AM
ဟားဟား ညီမမေ နာမည်ပေးပုံကိုတော့ ခိုက်တယ်ကွာ....။ ဒီမှာလည်း ခုတလော မိုးတွေ ဆက်တိုက်ရွာနေတော့ အူလိုက် ရှုလိုက်ရရင်....ကွာ...၊ ဒီကို အရည်နဲ့ စားပွဲတပွဲ၊ လိုက်ပွဲက အသုတ်နဲ့ တပွဲ ရယ်ဒီလုပ်ထားပေး၊ အိမ်ကလူကြီးအတွက် ပါဆယ်က နှစ်ပွဲ....ဟီးဟီး...တော်မှ ဆိုင်ရှင် မေတ္တာ မပျက်ခင်....:P
1/15/2011 6:48 AM
ရှူကြည့်ပြီး အူမိသွားမှ ခက်ရချေရဲ့
1/16/2011 5:39 AM
ဒုက္ခပဲ ဒီနေ့ အသစ်တင်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေက အစားအသောက်တွေချည်းပဲ ပြီးတော့လည်း ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေလို့ မစားရ သွားရည်ယိုပြီးပဲ ပြန်နေရတယ်။
အမယ်မင်းဗျာ အူပါ ရှုပါ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဖြင့်
ပိုစ့်ဖတ်ပြီးမှ လက်စသတ်တော့ အော် ငါ့ရောင်းရင်းကြီးအကြောင်းပါလားဟ ဆိုပြီး ဟင်းချနိုင်တော့တယ် ရောင်းရင်းကြီးဆိုတာက ကျွန်တော့်အကြိုက် အာပူလျှာပူ အစ်မ ပြောတဲ့ အူပါရှုပါ လေးကိုပြောတာ သရေတွေယို တံတွေးတွေ မြိုချ ဟင်း လူကို နှိပ်စက်တယ်
1/17/2011 9:01 AM
ရှူပြီးရင် ရှူသွားတယ်... (ပဲကပ်ကြော်ကိုပြောပါတယ်.)
ဘာမှာဦးမလဲ မမေ. :D
1/18/2011 1:31 PM
Naing Htun Lwin said...
၀ိတ်ချမလားရယ်လို့ အစားလျှော့စားပြီး ဗိုက်ဆာနေတုန်း မမေလုပ်တာ ကျွန်တော်အခုတော်တော်ပြသနာတက်နေပြီ.. :P ပုရွတ်ဆိတ်ကိုပြောပေးပါ အွန်လိုင်းမလာတာကြာလို့ သတိရနေတယ်လို့ :P
1/21/2011 3:26 AM
မမေဓါဝီက ဟင်းချက်လည်း ကောင်းတာပဲဗျ၊ ကြင်ဖက်တော်ဖြစ်လာမဲ့သူကတော့ ကံကောင်းဦးတော့မှာပဲနော်..